Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » India: nitarika ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fahafatesan'ny Jet Airways, fanafoanana hotely lehibe
Ny fahatapahana tampoka ny asan'ny Jet Airways dia nahatonga ny indostrian'ny fizahan-tany Indiana nitebiteby be loatra satria nahatonga ny fiakaran'ny vidin-tsolika 25 isan-jato eo amin'ireo sehatra rehetra mitarika amin'ny fanafoanana hotely lehibe, hoy ny manampahaizana momba ny indostria.
Sehatra lehibe sasany toa an'i Mumbai-Hyderabad, Mumbai-Delhi ary Delhi-Mumbai no nahita ny saran-dalana nanidina 62 isan-jato, 52 isan-jato ary 49 isan-jato, raha ny sehatra Bengaluru-Delhi kosa nisy fiatraikany ambany indrindra tamin'ny fiakarana 10 isan-jato fotoana fohy talohan'izay ary tsy ho ela taorian'ny fiorenan'ny Jet.
Sahirana ara-bola mandritra ny volana maro, nanapa-kevitra ny Jet Airways fa hiantso azy io nanomboka ny alarobia alina, namela asa 22,000 ho tandindonin-doza ary manelingelina ny faritan'ny mpandeha an-trano sy koa ny iraisam-pirenena satria Jet no kaompaniam-pitaterana lehibe indrindra mivoaka sy miditra ao amin'ny firenena.
"Ny fiantraikan'ny fitotongan'ny Jet Airways dia tsy vitan'ny sehatry ny seranam-piaramanidina ihany, fa nidaroka mafy ny fizahan-tany noho ny fiakaran'ny vidin'ny sidina nandritra ny vanim-potoanan'ny fangatahana. Ny fiatraikany dia toa tsy ho levona vetivety ary mety hitohy hatramin'ny faran'ny taona », hoy ny filohan'ny Fikambanan'ny Travel Agents of India (TAAI) Sunil Kumar, ny zoma teo.
Nilaza izy fa voakasik'izany avokoa na ny sehatra anatiny na ny fitsangatsanganana iraisampirenena na ireo sehatra mifandraika amin'izany satria manafoana ny famandrihana trano fandraisam-bahiny ny mpandeha satria 25% isan-jato ny salanisan'ny sidina.
Mpandraharaha mpizahatany malaza Cox & Kings 'Karan Anand dia nilaza fa ny fanakatonana an'i Jet dia nanakorontana ny drafitry ny dia maro izay namandrika tamin'ny Jet.
"Ity no vanim-potoana faratampon'ny dia ary ny sidina ho an'ny 10-12 andro manaraka dia miakatra farafahakeliny 25 isan-jato satria ny fahaiza-miasa dia nianjera nanakorontana ireo mpandeha minitra farany teo," hoy izy nanampy.
Na izany aza, Ngrant Pitti, mpiara-manorina ny dia an-tserasera Easemyyrip.com, dia nanandrana nanamaivana ny fiatraikany tamin'ny filazany fa miovaova ny vidim-piainana satria tsy azo vinavinaina hatrany ny indostrian'ny seranam-piaramanidina.
"Marina fa mikorontana ny mpandeha ankehitriny fa ny mandroso dia tsy hisy akony firy satria ny zotram-piaramanidina hafa toa an'i Spicejet sy Indigo dia mampiditra fiaramanidina bebe kokoa amin'ny fiaramanidin'izy ireo izay hanampy amin'ny fandanjana ny elanelan'ny fangatahana," hoy izy.
Ny famandrihana fiaramanidina sy ny sehatry ny fahitana Confirmtkt, Sripad Vaidya, dia nilaza fa noho ny fiakaran'ny sidina dia misy ny fisondrotan'ireo olona misafidy lamasinina sy bus.